Live Effects Enabler: sivana iOS 7 ho an'ny iDevices rehetra | Vaovao IPhone
Ny fitaovana tranainy indrindra azo ekena amin'ny iOS 7 dia ny iPad 2 sy ny iPhone 4; Saingy, ny fananana iOS 7 dia tsy midika hoe manana ny vaovao rehetra izy ireo, ohatra, misy iPad Air na iPhone 5S. Apple "bonnet" dia fiasa maro manomboka amin'ny kinova feno ka hatramin'ny fitaovana taloha toa ny: ny vokatra Parallax feno, Air Drop ary mazava ho azy, ny sivana amin'ny fakantsary (mivantana). Hifantoka amin'ity fampandrosoana farany ity izay niteraka savorovoro tamin'ny tranonkala izahay: sivana sary ao amin'ny fakan-tsary. Raha manana fitaovana vaovao ianao dia andramo miditra ny fakan-tsary ary hiseho ny bokotra kely hahafahanao mampiseho ny lisitry ny sivana sary azo ampiharina avy amin'ny fakantsary mihitsy (tsy misy fitsaboana manaraka). Raha te hankafy ireo vokatra / sivana ireo ianao (satria tsy mamela izany ny fitaovanao amin'ny iOS 7) misintona fotsiny Enabler effets mivantana avy any Cydia.
Sivan-tsary amin'ny fakan-tsary miaraka amin'ny "Live Effects Enabler"
Araka ny nolazaiko, ny iray amin'ireo zava-baovao tiako indrindra momba ny iOS 7 (ankoatry ny Air Drop) dia ny mety hametrahana sivana sary mivantana avy amin'ny fakantsary mihitsy; saingy, nanenenako ny fananako iPad 2 (satria io fampiasa io dia tsy notohanan'ny iOS 7 izay hapetraka amin'ny iPad-ko). Na izany na tsy izany, ao amin'ny iPad News dia manolotra vahaolana izahay hahafahana mampiasa ireo sivana ireo amin'ny fitaovana tsy mifanaraka amin'ny jailbreak amin'ny alàlan'ny tweak: Live Effects Enabler.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny misintona ny "Live Effects Enabler" avy amin'ny repo BigBoss (aza manahy fa napetrakao amin'ny toerana misy anao) amin'ny alàlan'ny Cydia. Ilay fanovana resahina, Enabler effets mivantana, Maimaimpoana izany ka tsy mila mandoa denaria akory ianao amin'izany.
Vantany vao tafapetraka ny "Live Effects Enabler" dia fidio ny application: "fakan-tsary»Ary eo amin'ny farany ambony havanana ianao dia hanana bokotra kely toa ilay hitanao amin'ny sary etsy ambony. Amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra, dia hozaraina ho faritra 9 samihafa ny efijery. Ny ampahany tsirairay dia misy vokany hafa amin'ny fahitan'ny fakantsary (toy ny ataon'ny iOS 7 amin'ny fitaovana tohanan'ny).
Fanazavana fanampiny - Fidinan'ny varotra IPad 2, nirongatra ny iPad Air
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Cydia » Live Effects Enabler: sivana iOS 7 ho an'ny iDevices rehetra (Cydia)
Salama, ny iPhone 5-ny vokany farany antsoina hoe instant, dia lilac ary koa mavokely na lilac fa tsy maitso antitra araka ny isehoany ao, maninona no mitranga izany ary ahoana no hanovako azy?
Tutorial: milalao miaraka amin'ny mpanara-maso ny PS3 sy ny iPhone na iPad (Jailbreak)
Mandoko, manome loko ny fampiharana Music ao amin'ny iOS 7 (Cydia)